ဓာတ်ငွေ့ထိုးနှက်မီးရှူးတိုင်က M-881 - တရုတ် Cixi ပင်လယ်ပြင် Anchor ဖိအား Lantern
190g pierceable ဓာတ်ငွေ့သည့်အရာတစ်ခုများအတွက်သဘာဝဓါတ်ငွေ့ထိုးနှက်မီးရှူးတိုင်
230g ဓာတ်ငွေ့သည့်အရာတစ်ခုပေါင်းလိုက်သော type ကို Self-တံဆိပျအတှကျအဓာတ်ငွေ့ထိုးနှက်မီးရှူးတိုင်
190g pierceable ဓာတ်ငွေ့သည့်အရာတစ်ခုဘို့မီးဖိုတပ် ချ.
230g ဓာတ်ငွေ့သည့်အရာတစ်ခုပေါင်းလိုက်သော type ကို Self-တံဆိပျအတှကျအမီးဖိုတပ် ချ.
500g pierceable ဓာတ်ငွေ့သည့်အရာတစ်ခုဘို့မီးဖိုတပ် ချ.
190g pierceable ဓာတ်ငွေ့သည့်အရာတစ်ခုများအတွက်သဘာဝဓါတ်ငွေ့ဆီမီးခွက်
220g ဓာတ်ငွေ့သည့်အရာတစ်ခုလှံစွပ်အမျိုးအစားအဝတ်အစားအစမ်းဝတ် Resealable များအတွက်သဘာဝဓါတ်ငွေ့ဆီမီးခွက်
ဓာတ်ငွေ့အပူပေးစက် & အခြားသူများ
ဖော်ပြချက်: သာ, ကအကြောင်းအရာ 190g pierceable butane ဓာတ်ငွေ့သည့်အရာတစ်ခုလိုက်နာ EN417-type အမျိုးအစား 200 (TUV type ကိုခွင့်ပြုချက် 02 ငါ 99) ဖြင့်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရဲ့များတွင်အသုံးပြုကောင်းစွာလေဝင်လေထွက်ဧရိယာများအတွက်အိတ်ဆောင်ငွေ့ဖိအားဓာတ်ငွေ့မီးရှူးတိုင်, ဓာတ်ငွေ့မှာရော်ဘာတံဆိပ်ကိုအတူထိုး pin ကို ဝင်ပေါက်ဆိုဓာတ်ငွေ့ leakage.the ဓာတ်ငွေ့ဝင်ပေါက်ဓာတ်ငွေ့ inlet.the ဓာတ်ငွေ့ကိုထိပုတ်ပါ variab နဲ့ဆေးထိုးအပ်အဆို့ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်ကြေးနီ nut.The ထိန်းညှိဓာတ်ငွေ့ကိုထိပုတ်ပါရန်ပေါင်းစပ်အဆိုပါပစ္စည်းတပ်ဆင်အသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါတယ်သည့်အရာတစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက် enclosure မှ fixed ဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ..
FOB စျေး: အမေရိကန် $ 10 - 20 / Piece
Min.Order အရေအတွက်: 600 Piece / ပိုငျးပိုငျး
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: T / T, L ကို A / C
သာ, ကအကြောင်းအရာ 190g pierceable butane ဓာတ်ငွေ့သည့်အရာတစ်ခုလိုက်နာ EN417-type အမျိုးအစား 200 (TUV type ကိုခွင့်ပြုချက် 02 ငါ 99) ဖြင့်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရဲ့များတွင်အသုံးပြုကောင်းစွာလေဝင်လေထွက်ဧရိယာများအတွက်အိတ်ဆောင်ငွေ့ဖိအားဓာတ်ငွေ့မီးရှူးတိုင်, ဓာတ်ငွေ့မှာရော်ဘာတံဆိပ်ကိုအတူထိုး pin ကို ဝင်ပေါက်ဓာတ်ငွေ့ inlet.the ဓာတ်ငွေ့ကိုထိပုတ်ပါ variable ကိုအနေအထားနှင့်အတူတစ်ဦးဆေးထိုးအပ်အဆို့ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်ဓာတ်ငွေ့ကိုထိပုတ်ပါရန်ပေါင်းစပ်အဆိုပါပစ္စည်းတပ်ဆင်အသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါတယ်မည်သည့်ဓာတ်ငွေ့ leakage.the ဓာတ်ငွေ့ဝင်ပေါက်သည့်အရာတစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ကြေးနီ nut.The ထိန်းညှိ enclosure မှ fixed ဖြစ်ပါတယ်တားဆီးဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ် .Manual စက်နှိုး။
ကြေးဝါကိုသေနတ်, သံမဏိကွန်တိန်နာ, ကို ABS လက်ကိုင်။
အမျိုးအစား: တိုက်ရိုက် Pressure- Butane ။
လူပျို burner, တစ်ခုတည်း injector (0.28mm) ။
ဝင်ပေါက်ဖိအား: ငွေ့ / တိုက်ရိုက်ဖိအား။
burner အမျိုးအစား: ကြေးနီကော်လံအမျိုးအစား။
စက်နှိုး: ဓာတ်ငွေ့ burner နှင့်အတူထည့်သွင်း။
Power: 1.7kW, စားသုံးမှု: 125g / ဇ Max.temp.:850 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
အရောင် box ထဲမှာထုပ်ပိုးတစ်ခုချင်းစီကို PC, တဦးတည်းစက္ဏူထူအတွက်ထုပ်ပိုး 24pcs ။
ဘ: 475G / PC ကို
အရည်အတွက်: 24PCS / CTN
6,480PCS / 20 ''
12,960PCS / 40 ''
ယခင်: ဓာတ်ငွေ့ထိုးနှက်မီးရှူးတိုင်က M-879
နောက်တစ်ခု: ဓာတ်ငွေ့ထိုးနှက်မီးရှူးတိုင်က M-886
190g Pierceable ဓာတ်ငွေ့သည့်အရာတစ်ခုသည်ဓာတ်ငွေ့ထိုးနှက် Torch
230g ဓါတ်ငွေ့သည့်အရာတစ်ခု Threaded အမျိုးအစားကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်သည်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကိုမှုတ် Torch
ဓါတ်ငွေ့ Butane Torch မှုတ်
Mini ကိုဓါတ်ငွေ့ Torch
Multi -Purpose ဓါတ်ငွေ့ Torch မှုတ်
ပြောင်းပြန်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ Torch မှုတ်
ဂဟေဆက်ဂွန်ဓာတ်ငွေ့ Torch မှုတ်
ပေါင်းလိုက်သော 230g ဓာတ်ငွေ့သည့်အရာတစ်ခုများအတွက်သဘာဝဓါတ်ငွေ့ထိုးနှက်မီးရှူးတိုင် ...
Bunsen burner က M-880
Zonghan စက်မှုဇုံ, Cixi, Ningbo, PRChina
ဖုန်းနံပါတ်: 86 574 63204227
ဆဲလ်ဖုန်း: 86 13858319136
E-mail ကို: 13858319136@163.com
ဖက်စ်: 86 574 63208532
WhatsApp ကို: 86 13858319136
ချစ်ခင်ရပါသောချင်းတို့နှင့် Madame ကြင်နာစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံးကျနော်တို့ဖေဖော်ဝါရီလ 26, 2018 (တနင်္လာနေ့) တွင်ပြန်လည်စတင်လိမ့်မယ်ဖေဖော်ဝါရီ 12 ကနေဖေဖော်ဝါရီ 25 မှတရုတ်နှစ်သစ်ကူး၏အားလပ်ရက်များအတွက်ပိတ်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းကြားရမည်ပေးပါ။ ဏမဆိုထပ်မံမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များရှိပါသည် အကယ်. ...